Faritra Atsimo Atsinanana sy V7V-NAMPIHANTAIN’NY FILOHAM-PIRENENA -
AccueilLa UneFaritra Atsimo Atsinanana sy V7V-NAMPIHANTAIN’NY FILOHAM-PIRENENA
Tsy miandry ela. Vantany vao manomboka ny taona 2017, avy hatrany dia nitsidika ny distrikan’i Farafangana, Faritra Atsimo Atsinanana, ny filoha Hery Rajaonarimampianina, omaly. Iny ihany koa mantsy no nanokafan’ny filoham-pirenena ny fitsidihana ireo faritra maro eto Madagasikara.
Nampihantain’ny filohan’ny Repoblika, araka izany, tamin’ny fandalovany tao Farafangana ireo Faritra roa, Atsimo Atsinanana sy Vatovavy- Fitovinany. Maromaro mantsy ireo natolotry ny Filoham-pirenena tamin’izany. Nahazo ny anjarany avokoa ny teo amin’ny sehatry ny fampianarana sy ny fambolena ary sosialy, toa ny fanomezana « panneau solaire », fizarana « kits scolaires » miisa 1936, fanolorana moto miisa 24 sy fiara tsy mataho-dalana roa sy moto ho an’ny talem-paritry fambolena any an-toerana.
Tsy vitan’izany fa teo ihany koa ny lafin’ny fotodrafitrasa, toa ny fanamboaran-dalana. Anisan’izany ny fanamboarana ny lalam-pirenena 12 na RN 12 mampitohy an’i Vangaindrano sy Tolagnaro. Nambaran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin’ny lahateny nataony fa horaisiny an-tanana mihitsy ny fanamboarana io lalana io mba hisokafana sy mba hivezivezen’ny vokatra ka hanatsara ny toekaren’ireo Faritra roa voalaza etsy ambony ireo.
Ankoatra izay, nampanantena ihany koa ny filoham-pirenena fa hamaha ny olana eo amin’ny lafin’ny angovo amin’ny alalan’ny fanomezana fotodrafitrasa fanodinana fako ho lasa angovo. Izany dia hamaha ny olan’ny mponina any an-toerana ary hanome sy hanokatra asa ho an’ny tanora maro.
Etsy andaniny, nambaran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa efa tafapaka eto Madagasikara ny fiovaovan’ny toetr’andro ka mila mientana sy mandray andraikitra ny rehetra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady amin’ny doro tanety. Tamin’izany no nanentanany ny mponina havitrika amin’ny fambolen-kazo.